ठूलो भवनको नवौं तलाबाट खस्दा बीएमडब्लू कुच्चियो, ज्यान जोगियो! - Khabar Nepali
होमपेज / रोचक / ठूलो भवनको नवौं तलाबाट खस्दा बीएमडब्लू कुच्चियो, ज्यान जोगियो!
अमेरिकाको न्युजर्सीमा एक व्यक्ति ठूलो भवनको नवौं तलाबाट खस्दा पनि बाँच्न सफल भएका छन्। ३१ वर्षका उनी बुधबार बिहानै एउटा भवनबाट सय फिट तल ख’सेका थिए। उनी पार्क गरिएको बीएमडब्लूमा ख’सेको बताइएको छ। सय फिटमाथिबाट खस्दा कार कु’च्चिए पनि उनको ज्या’न भने जोगिएको डेली मेलले जनाएको छ। उनी त्यतिमाथिबाट ख’स्दासमेत उनको अवस्था समान्य भएको बताइएको छ। यद्यपी उनको एउटा हात भने भाँ’च्चि’एको छ।
यो घटनामा ती व्यक्तिको ज्या’न जोगिनुलाई सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले चमत्कारिक भनेका छन्।
बहुतले पार्किङबाट निकाल्दा झ्यालमा झुन्डियो कार, भाइरल बन्यो भिडियो
रुसको मस्को शहरमा पोर्से मक्यान एसयूभी विचित्र तरिकाले दु’र्घटनाग्रस्त भएको छ । सो एसयूभी घरको झ्यालमा झुन्डिएको अवस्थामा देखिएको छ । रिपोर्टअनुसार रूसी प्रो–हक्की खेलाडी डेनिस काजिनोभले आफ्नी पत्नी र छोरासँगै बहुतले पार्किङ स्ट्यान्डबाट आफ्नो कार निकाल्दै गर्दा उक्त घटना भएको थियो । उनले आफ्नो कार निकाल्ने समयमा चिप्लो सतहको कारण चिप्लिएको र कारको ब्रेक नरोकिएपछि पार्किङ गर्ने ठाउँबाट बाहिर निस्किएको थियो । यो घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुँदै गइरहेको छ । सो एसयूभीले पार्किङ गर्ने ठाउँको कच्ची पर्खालमा प्वाल पारेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ ।
यद्यपि यस घटनामा कसैलाई पनि चो’ट लागेको थिएन । वास्तवमा कार रोक्नको लागि एउटा मेटल बिमले मदत गरेको थियो । सो बिम एसयूभीको विन्डस्क्रिनसँग सम्पर्कमा आयो र अगाडिको चक्का झु’न्डि’एको थियो । दुर्घटनाको समयमा पार्किङ गर्ने ठाउँ वरपर त्रासको वातावरण थियो ।
हक्की खेलाडी डेनिस काजिनोभले उक्त भवनको पार्किङ गर्ने ठाउँमा एउटा मात्र पक्की पर्खाल रहेको र बाँकी तीनतिर पर्खाल निर्माण गरिएको बताए । हिउँ पनि पार्किङको भुइँमा जमेको थियो । जसको कारण कार रोकिएन र चि’प्लिएको थियो । ती खेलाडीले आफूलाई भाग्यमानी ठानेको कुरा पनि बताए किनभने पर्खाल भत्किरहेको बेला कार खसेको थिएन, अन्यथा अप्रिय घटना हुने थियो ।
यिनै हुन् जो जहाजको ल्या’न्डि’ङ गि’यरमा बसेर ग्वाटेमालाबाट अमेरिका पुगे
दीपावलीको सरसफाईमा यी ५ चिज पाउनुभयो भने बुझ्नुहोस्, यसपटक माता लक्ष्मी तपाईंसँग प्रसन्न हुनुहुन्छ
श्रीमानसंग लुकाएर मगाएकी थिइन् अनलाईन सामान, डेलिभरी दिन आएकी युवतीले गरिदिइन् यस्तो हर्कत (भिडियो सहित)